ဂေါ်ဖီမကြိုက်လည်း ကြိတ်မှိတ်စားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇ ) ချက် -
Posted on December 12, 2018 December 12, 2018 Author Ei Mon	Comment(0)
မတတ်နိုင်ဘူးလေ.. ဒါတွေ ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့လည်း စားရတော့တာပေါ့..
ဂေါ်ဖီက အသုပ်စုံ ၊ ဟင်းချို ၊ သင်္ဘောသီးထောင်းနဲ့ အချဉ်ရည်တို့ထဲမှာ မပါမဖြစ် အရာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဂေါ်ဖီကြော်ဆိုရင်တော့ ဟင်းမကောင်းဘူးလို့ ခုထိ ထင်နေတုန်းပဲ 😀 😀 ။ ဂေါ်ဖီမှာ အဖြူရောင်၊ အနီရောင် ၊ ခရမ်းရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်ဆိုပြီး အရောင်အမျိုးမျိုး အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ယောင်းရေ။ ဒါဆို ဂေါ်ဖီများများစားပေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
၁။ ရောင်ရမ်းမှု ကင်းဝေးစေတယ်။
ဂေါ်ဖီမှာပါတဲ့ အန်သိုစိုင်ယာနင်ဓာတ်က ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပြီး ဂလူတမင်းက ဖျားနာခြင်း ၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ အဆစ်အမြစ် နာကျင်ခြင်းတွေကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်တာတွေကို ကူညီလျှော့ချပေးပါတယ်။
ဂေါ်ဖီမှာ ဗီတာမင် C ဓာတ် ကြွယ်ဝတာကြောင့် ကိုယ်ခံအားကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ အင်ဇိုင်းဓာတ်လည်း အပြည့်အဝ ပါဝင်တာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
၃။ အစာအိမ်အနာတွေကို ကုသပေးတယ်။
အစာအိမ် ပြည်တည်နာအတွက်ဆိုရင် ဂေါ်ဖီထုပ်က ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမင် U က အစာအိမ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ပြည်တည်နာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ အစာအိမ်အနာ သက်သာချင်ရင်တော့ ဂေါ်ဖီပြုတ်ရည်က အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ဘယ်တော့မှ အစိမ်းမစားသင့်သော အစားအစာ (၅ ) မျိုး
၄။ ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကင်ဆာဆန့်ကျင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းအနည်းငယ်က ဂေါ်ဖီထုပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အတွက် ကင်ဆာကျိတ်တွေ ကြီးထွားခြင်းကနေ ဟန့်တားပေးပါတယ်။ ဂေါ်ဖီများများစားတဲ့လူတွေက အူမကြီး ကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်း အနည်းပါးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတယ်။
ဂေါ်ဖီက အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံထနေတဲ့ အရေပြားဆဲလ်တွေကို သေစေပြီး ဆံသား ၊ အရေပြားနဲ့ လက်သည်းခြေသည်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် ပေးစွမ်းပါတယ်။
၆။ ကိုလက်စထရော ကျစေပါတယ်။
ဂေါ်ဖီမှာ ကိုလက်စထရောကျစေတဲ့ အကျိုးအာနိသင်ရှိပါတယ်။ ဂေါ်ဖီမှာပါတဲ့ အမျှင်ဓာတ်က အစာခြေလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ သည်းခြေအရည်နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး သည်းခြေရည်ထုတ်ရ လွယ်ကူစေတာကြောင့် ကိုလက်စထရော ကျစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဝိတ်ချချင်တဲ့ ယောင်းတွေဆိုရင် ဂေါ်ဖီအစိမ်း စားပေးသင့်ပါတယ်နော်။
Related Article >>> ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ မထည့်ထားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၇) မျိုး
၇။ အရိုးကျန်းမာရေး ကောင်းတယ်။
ဂေါ်ဖီမှာ ကယ်လ်ဆီယမ် ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် အရိုးသန်မာဖို့အတွက်ဆိုရင် အံ့ဖွယ်ဆေးတစ်လက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဓာတ်သုံးခုက အရိုးခိုင်မာတည်မြဲဖို့ ထောက်ကူပေးပြီး အရိုးပါးခြင်း နဲ့ အရိုးအက်ခြင်းတွေ ကင်းဝေးစေပါတယ်။
ဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေ သိထားပြီဆိုရင်တော့ ဟွန့်…ဂေါ်ဖီများ …မကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ လေသံလေး ပျောက်သွားလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့နော်..
References : Live Love Fruit,Wikipedia
မတတျနိုငျဘူးလေ.. ဒါတှေ ဒီလိုရှိတယျဆိုတော့လညျး စားရတော့တာပေါ့..
ဂျေါဖီက အသုပျစုံ ၊ ဟငျးခြို ၊ သင်ျဘောသီးထောငျးနဲ့ အခဉျြရညျတို့ထဲမှာ မပါမဖွဈ အရာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဂျေါဖီကွျောဆိုရငျတော့ ဟငျးမကောငျးဘူးလို့ ခုထိ ထငျနတေုနျးပဲ 😀 😀 ။ ဂျေါဖီမှာ အဖွူရောငျ၊ အနီရောငျ ၊ ခရမျးရောငျနဲ့ အစိမျးရောငျဆိုပွီး အရောငျအမြိုးမြိုး အရှယျအစား အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ ယောငျးရေ။ ဒါဆို ဂျေါဖီမြားမြားစားပေးသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ။
၁။ ရောငျရမျးမှု ကငျးဝေးစတေယျ။
ဂျေါဖီမှာပါတဲ့ အနျသိုစိုငျယာနငျဓာတျက ရောငျရမျးနာကငျြခွငျးကို လြှော့ခပြေးပွီး ဂလူတမငျးက ဖြားနာခွငျး ၊ ဓာတျမတညျ့ခွငျးနဲ့ အဆဈအမွဈ နာကငျြခွငျးတှကွေောငျ့ ရောငျရမျးခွငျး ဖွဈတာတှကေို ကူညီလြှော့ခပြေးပါတယျ။
ဂျေါဖီမှာ ဗီတာမငျ C ဓာတျ ကွှယျဝတာကွောငျ့ ကိုယျခံအားကို လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။ အငျဇိုငျးဓာတျလညျး အပွညျ့အဝ ပါဝငျတာကွောငျ့ အစာခွစေနဈကို ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
Related Article >>> ဘယျတော့မှ အစိမျးမစားသငျ့သော အစားအစာ (၅ ) မြိုး
၃။ အစာအိမျအနာတှကေို ကုသပေးတယျ။
အစာအိမျ ပွညျတညျနာအတှကျဆိုရငျ ဂျေါဖီထုပျက ဆေးဖကျဝငျပါတယျ။ ဂျေါဖီထဲမှာပါတဲ့ ဗီတာမငျ U က အစာအိမျကို ကောငျးမှနျစပွေီး ပွညျတညျနာတှကေို သကျသာစပေါတယျ။ အစာအိမျအနာ သကျသာခငျြရငျတော့ ဂျေါဖီပွုတျရညျက အကောငျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။
၄။ ကငျဆာကို ကာကှယျပေးပါတယျ။
ကငျဆာဆနျ့ကငျြတဲ့ ဒွပျပေါငျးအနညျးငယျက ဂျေါဖီထုပျထဲမှာ ပါဝငျတဲ့အတှကျ ကငျဆာကြိတျတှေ ကွီးထှားခွငျးကနေ ဟနျ့တားပေးပါတယျ။ ဂျေါဖီမြားမြားစားတဲ့လူတှကေ အူမကွီး ကငျဆာဖွဈပှားနှုနျး အနညျးပါးဆုံး ဖွဈပါတယျ။
၅။ ဆဲလျအသတှေကေို ဖယျရှားပေးတယျ။
ဂျေါဖီက အဆီပွနျပွီး ဝကျခွံထနတေဲ့ အရပွေားဆဲလျတှကေို သစေပွေီး ဆံသား ၊ အရပွေားနဲ့ လကျသညျးခွသေညျးတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျ ပေးစှမျးပါတယျ။
Related Article >>> ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ မထညျ့ထားသငျ့တဲ့ အစားအစာ (၇) မြိုး
၆။ ကိုလကျစထရော ကစြပေါတယျ။
ဂျေါဖီမှာ ကိုလကျစထရောကစြတေဲ့ အကြိုးအာနိသငျရှိပါတယျ။ ဂျေါဖီမှာပါတဲ့ အမြှငျဓာတျက အစာခွလေမျးကွောငျးထဲမှာရှိတဲ့ သညျးခွအေရညျနဲ့ ပေါငျးစပျပွီး သညျးခွရေညျထုတျရ လှယျကူစတောကွောငျ့ ကိုလကျစထရော ကစြပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဝိတျခခြငျြတဲ့ ယောငျးတှဆေိုရငျ ဂျေါဖီအစိမျး စားပေးသငျ့ပါတယျနျော။
၇။ အရိုးကနျြးမာရေး ကောငျးတယျ။
ဂျေါဖီမှာ ကယျလျဆီယမျ ၊ မဂ်ဂနီဆီယမျနဲ့ ပိုတကျဆီယမျဓာတျကွှယျဝတာကွောငျ့ အရိုးသနျမာဖို့အတှကျဆိုရငျ အံ့ဖှယျဆေးတဈလကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဓာတျသုံးခုက အရိုးခိုငျမာတညျမွဲဖို့ ထောကျကူပေးပွီး အရိုးပါးခွငျး နဲ့ အရိုးအကျခွငျးတှေ ကငျးဝေးစပေါတယျ။
ဒီလိုအကွောငျးရငျးတှေ သိထားပွီဆိုရငျတော့ ဟှနျ့…ဂျေါဖီမြား …မကွိုကျပါဘူးဆိုတဲ့ လသေံလေး ပြောကျသှားလိမျ့မယျ ထငျပါရဲ့နျော..
Tagged cabbage, Eat, Knowledge, reasons
Posted on February 22, 2018 Author Hana
ပါပီလေးတွေ၊ ပူစီလေးတွေကို ချစ်တတ်ကြတဲ့ ယောင်းတို့ရေ.. တစ်ခါတစ်ခါ သူတို့လေးတွေဆီက အလှေးတွေ ကပ်လာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်မှန်းမသိ စိတ်ညစ်စရာနော်… ဆံပင်တွေကြားထဲရောက်ပြီး ခေါင်းယားလာရင် ပိုဆိုး
လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက မှားယွင်းနေသလား?
Posted on July 31, 2017 Author
ကိုယ်သိတာတွေ မှားယွင်းနေရင် မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ အသိမမှားရအောင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေ ဖြေကြည့်ကြနော်။